मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले वित्तीय उपकरणमा पार्ने असर
मनोज ज्ञवाली काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षाले मौद्रिक तथा बित्तीय उपकरण तथा त्यसका सम्भावित असरहरुका बारेमा नेविल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीको टिप्पणी ः १. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशत...}
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले फागुन महिनाको लागि ब्याजदर बढाएका छन। पहिलो कोरोना को माहामारी सकिय सङ्गै तरलता को समस्या भोग्दै आएका बैंकहरुले लगानी योग्य रकम को जोहो गर्न ब्याजदर बढाउनु परेको बुझ्न मा आएको छ । फागुन महिना लागि सार्वजनिक ब्याजदर अनुसार अधिकतम ब्याजदर ११.०३% छ गत महिना बै...}
सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशको अर्थतन्त्र निर्माण
जनार्दन शर्मा काठमाडौं–सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छ । सरकारले लगानी गर्दैन, व्यवस्थापन गर्छ । संविधानमा आधारित रहेर सरकारले नीति निर्माण गर्ने हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएको कुराहरू अहिले लागू गर्न कठिन भ...}
विश्व पौडेल – के एमसिसी पास गर्यो भने नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ ? जसले एमसिसी पास गर्यो भने नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन, ति मध्य एकजनाले (पुर्वाधारविद) लेखेको भनेर निम्न कुरा मेरो इनबक्समा आयोः “सम्झौताको दफा ३.३ मा अमेरिकाको एमसिए ऐन २००३ को दफा...}
जनार्दन शर्मा काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ८.६ प्रतिशत र २०७४÷७५ मा ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४...}